SIDA LOO DIYAARIYO DABACASAHA FOR KAYDINTA JIILAALKA: WAXA LA SAMEEYO KA DIB GOOSASHADA, SIDA LOO GOOYO, QALALAN IYO JEERMISKA? - KHUDRADDA
Qoraalka kaydinta: sida loo diyaariyo karootada lagu keydiyo xilliga jiilaalka?
Xagaaga ayaa soo maray! Bannaanka u daryeelaan - afka oo dhan. Sida loo badbaadiyo beergooyska, si aad u badan si ay faa'iido u hesho dhamaan dadka jecel? Sida loo diyaariyo khudradda Karootada waxay aqoonsadeen dhammaan "boqoradda" dayrta. Sweet, savory, juicy iyo gaajo - waxaad leefahay leexintaada, laakiin awood leh! Waxay ka dhakhsaha badan tahay dhammaan dalagyada xididada ah si ay u engegaan oo u jeexaan, waxaa la socda kalluun cad iyo madow, oo waxay yaraysaa kuleylka waxayna isku dayeysaa inay mar kale ka baxdo.
Miyuu suurtogal u yahay in uu la qabsado dhibaatadan? Waxaad sameyn kartaa, haddii aad raacdo xeerarka qaarkood ee diyaarinta dabacasaha kaydinta iyo inta lagu jiro kaydka tooska ah.
Nadiifinta wakhtiga ah
Waxaad u baahan tahay inaad ka saarto karootada ka hor inta aan la barafoobin, halka cimiladu ay tahay mid diirran oo qalalan. Karootada loogu talagalay kaydinta, iskuday inaad beerato celceliska ama qaangaarka dambe. Ku saabsan noocyada ugu wanaagsan ee ku habboon kaydinta muddada dheer, waxaa halkan loo sheegay.
Ha tuurin baakooyinka abuurka guga kadibna waxaad ogaan doontaa inta uu le'eg yahay karootooto. Haddii baakidhka aan la keydinin, waxaa suurtogal ah in la ogaado wakhtiga goosashada marka ay soo baxdo muuqaalka sare The caleemaha hoose ee dhaladooda bilaabay inay huruud isu noqdaan - ha yawn, soo ururi beergooyska!
Ku saabsan goorta la saaro karootada beerta iyo sida loo sameeyo si sax ah, halkan ka akhri.
Waa maxay waqtiga ugu fiican?
Khudradda cagaaran ayaan ka faa'iideysan doonin jidhkaaga - weli wali ma aysan awoodin inaad hesho qadar ku filan oo sonkor ah. Iyo ka weyn, on lid ku ah, waxay soo ururshay sonkorta iyo asiidhyada amino in ka badan - hoos u dhigaan awoodda iyo dalagga dalagga geedka si deg deg ah. Karootada dhirta - jasiirad dhadhan leh oo loogu talagalay jiirka iyo cayayaanka.
Karootada ayaa waxyeellada ku ridaan godka leh cirfiidka, sidaas awgeed waxaad dhaawaceysaa xididada. Si tartiib ah u ilaali fargeeto ah oo ka soo saar carrada for dushooda.
Sida ugu dhakhsaha badan aad karooto - karba meel u dhig. Dhammaan weyna u kici karaan, yar yar, iyo sidoo kale miraha waxyeello leh waa inaan la dhigin. Qaab dhismeedka khudradda waa inuu ahaadaa mid cufan, labis, dabacsan iyo jilicsan.
Digniin! Si xoog leh u ruxrka ciidda si taxadar leh, ha ku dhufan. Tani waxay keeni kartaa dildilaaca, taas oo saameyn ku yeelan doonta tayada dabacasaha.
Ka dib goosashada iyo kala soocidda dabacasaha, waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba gooyso dushooda. Xoqitaanka ayaa la sameeyaa marxaladaha:
Dhalxumada waxaa loo jaraa madaxa khudradda.
Kadib qalajinta - madaxa ayaa la gooyaa by 1 sentimitir, gabi ahaanba ka saareen meesha koritaanka.
Tani waa in lagu sameeyaa mindi aad u fiiqan, si ay u gooyso xitaa iyo siman, sidaas darteed waxa ay u fiicantahay in "soo saaro" inta lagu jiro qalajinta. Dalagyada noocan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwa ugu caansan oo casiir leh xilliga qaboobaha - qoyaanka la sameeyay ayaa hayn doona qoyaan iyo dhammaan nafaqooyinka gudaha.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka dabacasaha baradho ayaa laga heli karaa halkan.
Rootiyada qalajinta ayaa sidoo kale ka fiican marxaladaha:
Isla markiiba ka dib goosashada karootada iyo iyaga la gooyaa marka hore, meel khudaarta ku dhex yaal beerta, qorraxda, oo dhawr saacadood qaado.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gooyay barta kore ee karootada, ka saar xididada si aad u qallalan wakhti dheer. Ku rid dabacasaha meel hawo madow ah oo qallalan qiyaastii 7-9 maalmood.
Kadibna kala soocida kale ayaa soo socota. Hadda dhammaan "khaladka" ee kala-soocidda asaasiga ah ayaa si cad u muuqda. Miraha khafiifka ah, dillaacsan iyo dillaacsan, waxay u muuqdaan iftiin. Dabadeed "karantiin" karootiga ayaa loo diri karaa marxaladda xiga ee diyaarinta kaydinta.
Sidee loo nadiifiyaa?
Miyaan u baahanahay inaan ku dhaqo khudaarta ka hor inta aan la shaqeyn? Maya, haddii dabacasaha si fiican loo qalajiyey, ka dibna dhammaan qaybaha dhulka iyo qashinka yaryar ayaa si sahlan loo gooyaa (waxaan wax badan u sheegnay baahida loo qabo in la dhaqo karootada kahor intaan loo dirin kaydinta halkan). Laakiin baahida loo qabo in la nadiifiyo dalagyada xididka. Habka ugu fudud ee loo sameyn karo waa kaneecada.
Kala xoqdo "kiniinka potassium" oo biyo ah si midab madow ah.
Samee farsamaynta maskaxda weyn. Ku rid dabacasaha xalka iyo qoyo 2 saacadood.
Dhameystir nidaamka leh hal qalab oo kale, hadda kama dambeysta.
Caawimaad! Dibedda dabacasaha xalka aaladda potassium, caawinaad fiican ee dagaalka ka dhanka ah kallana caddaan, oo leh kallana madow, habkani ma aha mid aan waxtar lahayn.
Siyaabaha loo dhigo
Waxaa jira siyaabo badan oo la xaqiijiyay oo lagu keydiyo karootiga.
Qaybta ugu caansan iyo kuwa ugu fudud ee loo isticmaalo kaydinta waa ciid:
Wuxuu u baahan yahay nadiif ah oo qalalan. Ku dixi lakabka lakabka saddex mitir oo dhulka ku yaal, ku dheji dabacasaha dabacsan iyo mar kale - ciid iyo wixii la mid ah ilaa dhammaadka. Ahraamta noocan oo kale ah ayaa la dhisi karaa illaa 75 sentimitir, waa wax aan caadi ahayn.
Inkasta oo ay bannaanka u badan yihiin waxay aaminsan yihiin in ay ka fiican tahay in la keydiyo khudaarta ee qoyan qoyan. Waxay u maleynayaan in dabacasuhu aad u casriyeeyo.
Labada ikhtiyaar waxay xaq u leeyihiin nolosha.
Qaabkan waxaad u baahan tahay sanduuqyada ama sanduuqyada kartoonada:
Karootada waxaa lagu meeleeyaa qoryo yar (oo aan ka badnayn 20 kiiloogaraam) ee weelka jira.
Xidhiidh si adag u xir oo ka fogee masaafada gaaban ee derbiga hoose.
Dhulka ayaa sidoo kale ka fiican in la dhigo meel yar. Kondensate ayaa laga yaabaa inay ka soo qaadato dabaqa iyo derbiyada iyo kedibna waa inaad u ogolaataa sanduuqyada iyo sawir qaadayaashu ay qaataan qoyan, haddii kale karootadu waxay yeelan doontaa Gagaash. Sababtaas awgeed, ha ku dhejin sanduuqa sanduuqa.
Habkani waa mid aad ufiican haddii aad qastay dabacasaha badan, waxaadna leedahay garaan yar.
Matoorka dhaadheer waxaa ku jira wax soo saarka joogtada ah, kaas oo xakameynaya muuqaalka kalyaha iyo bakteeriyada, sidaas darteed, waxay yihiin fiilo aad u fiican oo loogu talagalay sanduuqyada dabacasaha loogu talagalay kaydinta muddada dheer. Habka loo dhigayo khudaarta kaydinta waa mid la mid ah khudaarta cagaaran.
Habka asalka ah - isticmaalka diirka basasha:
Khudaarta caleenta, ku rusheeyeen basbaaska.
Dhammaan si wada jir ah u rux, si kasta oo duubka dabacasaha ee kabaha.
Doogga basasha waa hygroscopic iyo waqti isku mid ah ficil ahaan sida antiseptic, ilaalinta karootada ka soo lakulay iyo jeermiska.
Waa mid nadiif ah, laakiin wali waa hab wax ku ool ah ee "lying" karootada xilliga jiilaalka. Clay "shirt" ayaa ka caawin doonta khudradda in ay sii ahaato sida ugu fiican ee suurtogalka ah.
Dhoobo dhoobo biyo ah ilaa xaalad muruq ah, qallaji karootada oo ku rid qalajinta. Fuss badan, laakiin saameyntu waa u qalantaa!
Dabacasaha la qalajiyey, horayba loo galiyay caleemaha dhoobada, ayaa la geliyaa sanduuqyada waxayna hoos udhigaan qaybta hoose.
Hab aad u xiiso leh si loo ilaaliyo beergooyska - ka tag beerta! Si aad halis ugu gasho dhammaan goosashada, dabcan maaha mid u qalma. Laakiin qayb ka mid ah ayaa laga tegi karaa ilaa guga.
Dhalooyinka dabacasaha ah ee ka baxa "barafka" waa la jaraa, oo ma tegin dabo.
Sariir leh dalagyo xidid ah ayaa la diiriyaa - daboolay ciid, filim ayaa lagu ridayaa.
Ka dibna qaabdhismeedka guud oo dhan ayaa la daadiyay peat ama gran, waxaad codsan kartaa humus.
Xilliga jiilaalka, waxaad si adag u awoodi doontaa inaad isku daydo karooto noocaas ah, laakiin xilliga guga iyo ilaa goosashada cusub ee sariirtaada beertaada ayaa farxad gelin doonta qoyska oo dhan oo leh karootada cusub iyo casiir leh.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo ilaaliyo dabacasaha beerta ilaa guga, halkan ka akhriso, iyo qodobkan waxaan ka wada hadalnay dhamaan siyaabaha suurtagalka ah ee lagu kaydin karootada dhulka.
Abuuritaanka xaaladaha saxda ah
Si karootada loo keydiyo tayada iyo waqti dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la adkeeyo xuduudaha kaydka qaar ka mid ah - qoyaan, heerkulka kaydinta.
Heerkulka ugu wanaagsan ee kaydinta dabacasaha waa 0 ilaa +4 digrii. Haddii heerkulku sare u kaco, karootiga wuxuu bilaabi doonaa inuu biqlo oo engego. Haddii heerkulku hoos u dhaco, karootiga wuxuu qaboojin doonaa uun, iyo ka dib dhalaalinta, waxay qudhuntaa.
Waa inaad ku haysaa qoyaan caadi ah oo ku jira dhulkaaga hoose. Wixii karootada, sicirkaan waxaa lagu qeexay 60%. Tani mar kale ayay la wareegaysaa biqilka ee xididka iyo qulqulka. Si loo ilaaliyo qoyaanka la rabay, qalabka hygroscopic waxaa loo isticmaalaa (ciid, balka, diirka basasha, iwm.).
Waxaa jira noocyo badan oo karooti hoose ah? Ha ku degdegin inaad iska tuurto khudaarta caanka ah. Cunto noocan oo kale ah ayaa loo diyaarin karaa kaydinta, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo sameeyo. Ku dhaq xididdada, diirka iyo diirka. Ka dibna ku rid weel balaastiig ah oo lagu xakameynayo ama bac balaastig ah oo ku soo wareeji qaboojiyaha. Xilliga jiilaalka, waxaad diyaar u ahaataa karootada wax dalab ah. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan karootada barafowga ee jiilaalka waxaa laga heli karaa halkan.
Digniin! Haddii aad dadaal iyo isku daydo, ka dibna goosashada ku rid garabka mid kasta! Iyadoo la raacayo qawaaniinta - khudaarta cagaaran waxay ku badan tahay fitamiinada iyo walxaha u leh bini-aadanka.
Waxaad aragtaa - inta badan "dhibaatooyin" leh boqoradda boqorkan. Laakiin waa u qalantaa! Waa maxay nooca maraq ah oo aan karootada lahayn? Iyo ma aha oo kaliya! Xilliga jiilaalka, waxaad ku farxi doontaa qoyskaaga oo leh dufan casiir leh oo casiir leh, ka samee cabitaan caafimaad leh iyo salad badan oo laga helo. Karootada macaan iyo qoyan adiga ayaa jiilaalka!